I-TONVA Extrusion Blow Molding Machine Abakhiqizi nabahlinzeki - China TONVA Extrusion Blow Molding Machine Factory
1. Le modeli ibonakala ngokungangcoliswa, isivinini esikhulu, ukuzinza, ukonga ugesi kanye nesimo esiqondile sokuhamba kwenqola. 2. Umshini wenziwa ngaphandle kohlelo lwe-hydraulic kepha uhlelo lwe-servo motor-control luyamukelwa ukuze lisebenzise ngokushesha isikhunta ngokunemba okuphendula ngamandla amakhulu okuqinisa. Ngakho-ke, indawo engakhiqizi ukungcola ihlangabezana kakhulu nezidingo zokupakishwa kwemithi. 3. Ukukhiqizwa kwesivinini esikhulu nokuzinzile kungafinyelela kuma-PC angaphezu kwezinkulungwane eziyishumi ngosuku. Futhi amandla angama-40% angagcinwa uma kuqhathaniswa nohlelo lwe-hydraulic. 4. Isakhiwo sangaphakathi esenziwe kabusha senhloko yokufa siqinisekisa kahle ukuthi ipulasitiki encibilikayo yehla iqonde ngaphandle kokuphambuka. Iphutha lesisindo lingalawulwa ku-0.1 gram. 5. Izinga lemikhiqizo ehlulekile lingehliswa ngempumelelo njengoba lilula futhi lifundeka kalula ngokulungiswa nokusebenza komshini.
1.Toggle clamping isakhiwo ngaphandle donsa-induku design has even and strong clamping force and big mold-fixing plate. 2.Bottle odongeni ukujiya komgodi ngamunye wenziwa ngisho nendawo yangaphandle iyashelela ngokuklanywa kwesikhungo sokudla ikhanda lokufa, kusetshenzwe isikhungo somshini we-CNC. Izakhi ze-hydraulic ezenziwe kahle ezi-3, kumikhiqizo engenisiwe, ziqinisekisa ukuthi umshini usebenza ngokuqinile futhi kahle. Uhlelo lwe-4.MOOG 100 Points Parison Controller lungasetshenziswa ukuthuthukisa ikhwalithi yomkhiqizo. 5.Lolu hlobo lungathuthukiswa lube "Uhlobo lwe-Hybrid", ingxenye yokuhamba yenqola yakhelwe nge-servo motor ukufeza umsindo, ukusebenza okulula, isikhundla esiqondile kanye ne-swift center-focus on mold. 6.Machine kungenziwa yakhelwe nge amarobhothi amm, elihambayo, umhloli ukuvuza, e-isikhunta ilebula, umshini emaphaketheni, njll njengoba imfuneko sakho.
.lt kufanelekile ukukhiqiza ibhodlela likaphethiloli elingu-1L-12L, ibhodlela likawoyela wokugcoba, njll. ukwelashwa okushelelayo ngaphakathi kwekhanda lokufa elingenayo i-angle efile kumgijimi wokugeleza kwejika kunika umphumela omuhle ekubusheleleni futhi akukho migqa ngaphandle nangaphakathi kwemikhiqizo eqediwe. Umphumela we-multi-ungqimba co-extrusion, nenketho yomklamo womugqa obonakalayo kumkhiqizo ophelile, kuqinisekisa ukujiya okufanayo kumaleyisi kanye ne-入 -shaped flow runner design ngaphakathi kwekhanda lokufa, ngamahora angaphansi kwamahora amabili okushintsha kombala, dala umugqa oguqukayo futhi oqondile obonakalayo nangobubanzi phezulu nangaphezulu. I-4.Machine ingahlonyelwa ngama-auto deflashing, amayunithi wokukhipha womkhiqizo ophelile, ama-conveyor wezinto ezilahlwayo nomkhiqizo ophelile, ilebula le-in-mold kanye nomhloli ovuzayo. Le modeli ingathuthukiswa ibe Uhlobo lwe-Hybrid ", ingxenye yokuhamba yenqola yakhelwe nge-servo motor ukufeza umsindo, ukusebenza okulula, isikhundla esiqondile kanye ne-swift center-focus on mold.